लुक्लाको लुट र मेरो इज्जत | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← Buddha-era relics` found in Lumbini, nepal
आँखा भित्र राख्छु तिमीलाई (गीति कबिता) →
लुक्लाको लुट र मेरो इज्जत
Posted on 07/11/2011 by जय आले | टिप्पणी छोड्नुहोस्
५ नोभेम्बर २०११ । लुक्लामा पर्यटकहरुको विजोग भन्ने समाचारले मेरो मन भतभत पोलिरहेको छ । पर्यटक भन्नाले बाहिर देशका पाहुनाहरु, बाहिर देशकाहरु आ-आफ्नो काममा असाध्य ब्यस्त हुन्छन् । कामको बोझबाट थाकेकाहरु केही समय मिलाएर आराम गर्न, मनोरन्जन लिन नेपालको विभिन्न ठाँउहरुमा घुम्न आएका हुन्छन् । उनीहरुको लागि एक मिनेट समय पनि महत्वपूर्ण हुन्छ तर उनीहरुलाई नै खराब मौषमको कारण हप्तौ लुक्लामै रोकेर राख्नु के जायज होला ?
संसारको सबैभन्दा उच्चस्थान सगरमाथा चढ्न र त्यसको फेदी सम्म ट्रेकिङ जानेहरुले प्रायः शतप्रतिशतले नै लुक्ला हवाई मार्ग प्रयोग गर्नु पर्ने बाध्यता छ । संसारको सबैभन्दा जोखिमपूर्ण एयरपोर्ट लुक्ला अवतरण गर्नु अगावै देखिने दृष्यहरु अत्यन्तै सुन्दर छन् । संसारमा सायदै यस्तो दृष्य देख्न पाइन्छ । आफ्नै देशमा यति सुन्दर ठाँउहरु देखेर खुसिले मेरो आँखा टिल्पिलायो । विहान साढे ७ बजे आकास खुलेको थियो । घामका किरणहरुले लुक्लालाई छुदै थियो । हामी लुक्लामा उत्रियौ र नाम्चे तर्फ बाटो लाग्यौ । पर्यटकहरुको बाक्लो उपस्थिती र बाटोको दाँयावाँया देखिने सुन्दर सफा दृष्यहरुले नेपाल होइन कि जस्तो भान हुन्थ्यो । विकसित युरोप, वाल्कन मुलुक झै लाग्थ्यो । कतैकतै भारतको उत्तरखण्ड राज्यको पिन्दारी ग्लेसियर झै देखिन्थ्यो । म यति सम्म भन्न सक्छु सगरमाथा इलाकाका ग्लेसियर नपुगेकाहरुले हाम्रो देशमा यति सुन्दर ठाँउहरु छन भनेर कल्पना समेत गरेका हुदैनन ।
बाटोमा भेटिने ठूठूला ढुङ्गाहरुमा कुदिएका बुद्ध मन्त्रहरु अति रोचक देखिन्थे, बाटोको छेउमा भेटिने टिमुर, तितेपाती लगायतका नयाँ पालुवा, जंगलैभरी उन्माद फूलेका गुराँसहरु, विभिन्न प्रकारका चराचुरुङ्गीहरु, स्याउका फूलहरु, उब्जाउशिल पाखा कान्लाहरुमा हलहल हूर्किएका सागसब्जीहरु, स्थानियवासीहरुको बोलाइलो आफन्तपन, आखै भरीको सफा र स्वच्छ हिमाल, याक, खच्चरहरुको लर्को, भरियाहरुका आनन्दको दुखः, थाप्लोको नाम्लो संगै दोहरी र मायाप्रितिका गीतहरु मोवाइलको सेटबाट कानकानमा गुन्जिएको पाउदा म खुसिले भुतुक्कै भए । मोबाइल आविष्कार गर्ने, सस्तो मोवाइल बनाउने र मोवाइल नेटवर्क विस्तार गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिए । लामो बाटोमा साथिहरु संग जनजीवनमा मोबाइलले पारेको प्रभाव सम्बन्धमा छलफल पनि भयो । आधुनिक र शहरियाहरुको समृद्ध जीवन भन्दा भरियाहरुको सिधा, निश्कंलक र आनन्दको जिन्दगी देखेर मलाई ईश्या लाग्यो । हामी उकालो र जंगल जंगल हिड्थ्यौ तर प्रत्यक बिसाउनीमा फूटबल, टेनिस, गल्फ आदी खेलको रिजल्ट मोवाइलमा हेथ्यौ । स्काइपीबाट घरमा सम्पर्क गथ्यौ । हामी ७ जना नेपाली थियौ र ५ जना विदेशी जो हामी संगै काम गर्छौ थिए । उनीहरु त्यो दुर्गम ठाँउमा ती सुविधा देखेर चकित भए । हामी सधै तिनै विदेशी सहकर्मी साथिहरु थियौ, त्यसैले हामीलाई धेरैले गाइड भन्थे, धेरै ठाँउमा हामीलाई गाइड भनेर डिस्काउन्ट पनि दिए । नेपालीहरु टुरिष्ट अर्थात आन्तरिक टुरिष्ट हुन सक्छन भन्ने ’bout साधारणलाई ख्याल सम्म भएको पाइएन ।
काठमाडौंबाट लुक्ला प्रस्थानपूर्व कति खर्च बोक्ने भन्ने सम्बन्धमा राम्रो जानकारी नभएको र फाकदिनमै एक लिटर उम्लिएको पानीलाई रु ३ सय तिर्नुपर्ने, नुहाउने पानीको लागि पनि रु ५ सय सम्म तिर्नुपर्ने अवस्थाले भने हामी तर्सियौ । नाम्चे बजारमा विभिन्न लुगाफाँटाहरु ओर्जिनल पाउनु, नाम्चेका पप, रेष्टुरेष्टहरु यूरोप स्टाइलको पाउदा भने गजबै लाग्यो । नाम्चे नजिकैको बस्ति खुम्जुङ र खुम्दे भ्यालीको दृष्य अविश्मरणिय रह्यो । ट्याङबोचे जंगलको गुराँहरुले डाँडै ढाँकेको झनै मनमोहक लाग्यो । पुमरी हिमाल, आमा डब्लन, तुत्से र सगरमाथाको सुन्दरता बर्णन गरि नसक्नुको थियो ।
हामीलाई अवगत हुनुपर्दछ कि समयमै काठमाडौं फर्कन नसकेका कारण कति पर्यटकहरुको काठमाडौ देखि आफ्नो देश फर्कने फ्लाइट छुटेका होलान । समयमै आफ्नो काम, कार्यालयमा नपुग्दा कतिको ब्यापार चौपट भएका होलान् ? कतिले जाँगिर गुमाउदै होलान् । कतिले महत्वपूर्ण परिक्षाबाट बंचित हुदै होलान । बेखर्ची भएर कतिलाई लुक्ला रहन गाह्रो भएको होला । उनीहरुमा नेपाल प्रति कस्तो अनुभूति भइरहेको होला ? यसको जिम्मेवार सरकार हुने कि नहुने ? किन कि लुक्ला नजिकको गाँउमा गाडी बाटो पुगिसकेकोले सरकारले चाहेमा केही महिना भित्रै नै गाडी बाटो लुक्ला मात्र होइन नाम्चे नै पुर्यान सक्दछ किन त्यो काम सरकारले गर्दैन ? भारी बोक्ने ५ सय श्रमजीवि र २ सय बाटोका ब्यापारी घरानाको ख्याल राख्नेहरुले हजारौ विदेशी पर्यटकहरुको ’boutमा ख्याल राख्न पर्छ कि पर्दैन ?